၂၂ ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် WWDC 2020 ကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ? – DigitalTimes
၂၂ ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် WWDC 2020 ကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ?
Apple’s Worldwide Developers Conference (WWDC) ဟာ ဆော့ဖ်ဝဲ အသားပေး ပွဲဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကိုပါ ကြေညာလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ပွဲတက်ဖို့ ဒေါ်လာ ၁,၅၉၉ လောက် ကျသင့်ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ်ကြောင့် အွန်လိုင်းကနေပဲ ပွဲကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ ကြည့်နိုင်မှာပါ။
ဒီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပွဲစတင် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး Apple YouTube Channel ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁ ခွဲလောက်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုမှာ Reminder သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံး အနေနဲ့ YouTube မှာ ပြသမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ထုံးစံအတိုင်း Apple.com , Apple Developer App နဲ့ Apple TV App တွေကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Windows PC မှာဆိုရင် Apple Video Player ဟာ Microsoft Edge Browser ကိုပဲ ထောက်ပံ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ကြေညာမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားနေပြီး Apple ဟာ နောက်ပိုင်းထုတ် Macs နဲ့ MacBooks တွေမှာ ARM အခြေပြု Processor တွေကို ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်သေး ဘောင်တွေပါတဲ့ iMac ဒီဇိုင်း အသစ်ကို ချပြနိုင်ပြီး Air Tags Tracking Devices ကို မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ iOS နဲ့ macOS Update တွေက အဓိက အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
Android 10 Update ရသွားတဲ့ nubia Red Magic 3